प्रजातन्त्र धरापमा, कांग्रेस आफ्नै धुनमा - नेपालबहस
गृहपृष्ठ › विचार / बहस › सम्पादकीय
प्रजातन्त्र धरापमा, कांग्रेस आफ्नै धुनमा
| १५:४४:१० मा प्रकाशित
७ फागुन, काठमाडौं । आज फागुन ७ गते , प्रजातन्त्र दिवस । केही वर्षअघिसम्म बढो तामझामका साथ यो दिवस मनाइन्थ्यो । नेपाली कांग्रेसको अगुवाईमा एकतन्त्रीय जहाँनिया राणा शासनविरुद्ध सफलता पाएको दिन थियो । प्रजातन्त्र दिवस लामो समयसम्म हर्षाेल्लासका मनाइन्थ्यो । कांग्रेसले मात्र नभई पञ्चायती शासन व्यवस्थामा समेत भव्यताका साथ मनाइने यो दिवस दोस्रो जनआन्दोलन अर्थात, ०६३ सालपछि गुमनाम जस्तै भएको छ ।
माओवादी पक्ष मूलधारको राजनीतिमा आएपछि फागुन ७ गते ओझेलमा परेको हो । नेपाली कांग्रेसले यो दिवसलाई जुनरुपमा स्मरण गर्नुपर्ने हो, त्यसरी गर्न सकिरहेको छैन । नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका दिशामा केन्द्रित छन् । देशमा प्रजातन्त्रमाथि यति ठूलो हमला भएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपतिलाई ढाल बनाएर प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै पार्टीले खेद व्यक्त गरेको भएपनि ठोस कार्यनीति भने बनाउन सकेको छैन् ।
यो विषयलाई कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमै पार्टी भित्र दुईधार रहेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा ओलीले चुनाव गराउँछन्, कांग्रेस सफल हुन्छ भन्ने सपनामा रहेका छन्, जबकी इतर पक्ष भने ओली सत्ता जोगाउन मात्रै यस्ता नाटक रचिरहेको भन्दै आन्दोलन चर्काउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । यसरी कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी दोधारमा बस्दा लोकतन्त्र नै धरापमा परेको छ ।
तर कांग्रेस नेतृत्वलाई यतापट्टि कुनै चासो नै भएन । कसलाई उपयोग गरेर पार्टी र सरकार कब्जा गर्ने भन्ने ध्याउन्नमै नेतृत्व अल्झिएको छ । नेताहरु मञ्चबाटै एक अर्कालाई आक्षेप लगाउँछन्, तर प्रजातन्त्रमाथि भएको प्रहारबारे बहस चलाउन सक्दैनन् । अझ ओलीको निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने हिम्मत पनि गर्दैनन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यसबारे छलफल हुँदा नेतृत्व आन्दोलन गर्न तयार देखिएन ।
आजको दिन कांग्रेसले प्रजातन्त्रका बारेमा बहस र छलफल चलाउनुपर्ने हो । कम्तिमा पनि ओलीले गरेको असंवैधानिक कामको आलोचना गर्दै खबरदारी गर्नुपर्ने हो । तर कांग्रेस नेतृत्वलाई यतापट्टि कुनै चासो नै भएन । कसलाई उपयोग गरेर पार्टी र सरकार कब्जा गर्ने भन्ने ध्याउन्नमै नेतृत्व अल्झिएको छ । नेताहरु मञ्चबाटै एक अर्कालाई आक्षेप लगाउँछन्, तर प्रजातन्त्रमाथि भएको प्रहारबारे बहस चलाउन सक्दैनन् । अझ ओलीको निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने हिम्मत पनि गर्दैनन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यसबारे छलफल हुँदा नेतृत्व आन्दोलन गर्न तयार देखिएन । हिजै मात्र यस्तो दृश्य कार्यसमिति बैठकमा देखियो ।
त्यसका लागि महाधिवेश भन्दा अगाडि आम निर्वाचन भइदेओस् भन्ने देउवाको इच्छा रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा निवाचन भयो भने विभाजित नेकपा धूलोपिठो हुने उनको ठम्याई छ । साथै, चुनावमा आफू पक्षका लागि टिकट दिलाएर जिताउन सक्दा सत्ता कब्जा हुने र त्यसैका बलमा महाधिवेशमासमेत सफलता प्राप्त हुने उनको बुझाई छ ।
असन्तुष्ट पक्षले ओलीविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन आवाज उठायो । ओली कदम असंवैधानिक भनिसकेपछि विरुद्ध आन्दोलन चर्काउन के को लाज ? धरैले यस्तो प्रश्न उठाएपनि सभापति देउवाले भने मानेनन् । जसले गर्दा आजकै दिनपनि ओलीविरुद्ध कुनै कार्यक्रम गर्न पाएन कांग्रेसले । समयमा महाधिवेशन नगर्ने अनि पदावधि भने बढाउने प्रवृत्तिमा नेतृत्व अल्मलिएको छ । पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार, आज फागुन ७ देखि १० गतेसम्म राजधानीमा पार्टीको चौधौं महाधिवेशन हुनुपर्ने हो । विभिन्न कारण देखाएर महाधिवेन गरिएन, त्यसैले हिजोकै बैठकले कार्यसमितिको म्याद थपेर २०७८ भदौ ७ – १० गतेसम्म महाधिवेशनको नयाँ मिति निर्धारण गरेको छ ।
सभापति देउवाको चाहना जसरी भएपनि पार्टी र सरकार कब्जा गर्ने नै रहेको बुझ्न कठिन छैन । अर्काे कार्यकालका लागि फेरि सभापति बन्ने उनमा उत्कट अभिलाषा छ । त्यसका लागि महाधिवेशन भन्दा अगाडि आम निर्वाचन भइदेओस् भन्ने देउवाको इच्छा रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा निवाचन भयो भने विभाजित नेकपा धूलोपिठो हुने उनको ठम्याई छ । साथै, चुनावमा आफू पक्षका लागि टिकट दिलाएर जिताउन सक्दा सत्ता कब्जा हुने र त्यसैका बलमा महाधिवेशमासमेत सफलता प्राप्त हुने उनको बुझाई छ ।
देउवाको अनुमान एक हिसाबले सही नै हो । अहिले विभाजित नेकपा चुनावमा जाँदा त्यसको फाइदा कांग्रेसलाई नै हुने हो । तर सवाल त्यो होइन, सवाल चुनाव हुन्छ हुँदैन भन्ने चाहिं हो । ओली जस्तो कुटिल चाला चल्ने मानिसले आफू हार्ने चुनाव गराउलान् त ? पक्कै पनि गराउनेवाला छैनन् । त्यसको छनक उनले निर्वाचन आयोगमार्फत दिइसके । दुईतिहाई मत रहेको प्रचण्ड–माधव समूहलाई आयोगले अझै कानूनी मान्यता दिएको छैन ।
यसको अर्थ आयोग नै चाहँदैन ओली चिढिउन् । ओलीलाई खुशी पार्दा अर्काे समूह सडकमा रहने अवस्था आउनेछ । प्रचण्ड–माधव समूह सडकमा छाडेर चुनाव हुने कल्पना गर्नु आर्फैमा मूर्खता हो । यति कुरा कांग्रेस सभापति देउवाले चाहिं नबुझेका पक्कै छैन होला । त्यसैले कांग्रेस फेरि पनि लोकतन्त्रका लागि बलिदानीपूर्ण आन्दोलन गर्न नपरोस् भन्ने चाहन्छ भने ओलीविरुद्धको अभियान तीब्र बनाउनैपर्छ । अन्यथा नेपाली जनताले फेरि अर्काे जनआन्दोलन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि ।
प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा १० घण्टा पहिले
दाहाल–नेपाल समूहको पत्र संसद सचिवालयद्धारा दर्ता गर्न अस्वीकार १२ घण्टा पहिले
आज मेघगर्जन र चट्याङसहित पानी पर्ने सम्भावना १७ घण्टा पहिले
बीच भलिबलको उपाधि कञ्चनपुरलाई १२ घण्टा पहिले
महाशिवरात्रिलाई मध्यनजर गर्दै शनिबार वाग्मती सफाइ गरिने ४ दिन पहिले
फेवातालको चारकिल्ला र सिमाना विवरण पहिलोपल्ट नेपाल राजपत्रमा ५ दिन पहिले
सरकार र विप्लवबीच पहिलो चरणको वार्ता सकियाे ५ दिन पहिले
सिंगटी हाइड्रो इनर्जीले चैत ६ गतेदेखि २९ लाख कित्ता आईपीओमा बिक्री गर्ने ३ दिन पहिले
वसन्तपुर क्षेत्रका अनधिकृत पसलहरु हटाउन सात दिने अल्टीमेटम, नटेरे कारवाही ६ दिन पहिले
आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सकाे लाभांश घोषणा ३ हप्ता पहिले
अभियानकर्ताले दिए काठमाडौं महानगरपालिका अगाडि धर्ना १ हप्ता पहिले
प्रदेश १ मा पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाउदै सरकार ६ दिन पहिले
कामना सेवाको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद लम्बियो, कहिलेसम्म भर्न मिल्ने ? ४ हप्ता पहिले
स्पेनिस खेलाडी नाडाल अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश ३ हप्ता पहिले
सोमबारदेखि आयुर्वेद विज्ञानमा स्नातकको पढाइ शुरु ४ हप्ता पहिले
मृत्युदण्ड सम्बन्धी अमेरिकी संघीय कानुन सच्याउन युरोपेली संघको आग्रह ८ महिना पहिले
कञ्चनपुरमा एचआइभी एड्स सङ्क्रमितहरुको मृत्युदर घट्दै ! २ वर्ष पहिले